Lifestyle – OOTDMYANMAR
EAR TATTOOS CUTER THAN PIERCINGS
No Comments on EAR TATTOOS CUTER THAN PIERCINGS
နားပေါက်ထက်ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Ear Tattoo လေးတွေ
Tattoos were on hype last year and just as 2021 started people still can’t get enough of them. However tattoo enthusiasts wanted to place their ink in more unique spots. And if you’re looking for an uncommon area to place your tattoo, consider your ears. It’s cool, and can replace your regular earrings!
မနှစ်က Tattoo တွေခေတ်စားခဲ့သလို့ ၂၀၂၁ ရဲ့အစမှာလည်း အားလုံးက Tattoo အသစ်ထိုးဖို့ စိတ်ကူးနေကြတုန်းပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တက်တူးချစ်သူတွေက သူတို့ရဲ့တက်တူးကို ထူးခြားတဲ့နေရာတွေမှာ အမှတ်တရ ထိုးချင်ကြပါတယ်။ သာမာန်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ တက်တူးထိုးဖို့စဉ်းစာနေတယ်ဆိုရင်တော့ နားရွက်မှာထိုးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ အထာလည်းကျသလို ဝတ်နေကျ နားကပ်နဲ့လည်းဖုံးထားလို့ရပါတယ်။
Want some inspos? Check out6cutest designs we’ve spotted on Instagram:
ဘာပုံထိုးရမလဲဆိုတာသိချင်လား? Instagram မှာတွေ့ထားတဲ့ ချစ်စရာအကောင်းဆုံး တက်တူးဒီဇိုင်း ၆ ခုကို ရွေးပြပါရစေ။
1, minimalist hoops.
A post shared by Taguj #dnestetujem (@dnes_tetujem)
2. Floral designs
A post shared by tattooer 채화 그리고 안외로 (@ch.tattoo.ahn)
3. rainbow-colored lines.
A post shared by ᵀᴬᴺ ᵀᴬᵀᵀᴼᴼ(ᴴᴬᴺᴰᴾᴼᴷᴱ) (@_tan_tattoo)
4. moon and star tattoos
လ နဲ့ ကြယ် ဒီဇိုင်း
A post shared by Kelly Blad (@kly253)
5. doodle-like design!
6. paw print
Tags eartattoos, ootdmyanmar, tattoos
HOW YOU CAN MAKE SOJU LATTE AT HOME
No Comments on HOW YOU CAN MAKE SOJU LATTE AT HOME
Soju is an alcoholic beverage from Korea that became popular because of the Hallyu wave.
The usual soju cocktail combo has always been soju & Yakult. If you are tired of this mixture, we found an easy recipe for soju and coffee lovers out there ——soju latte!
Soju latte, isacoffee cocktail that’s made withacombination of soju and coffee. This type of drink will definitely give new texture toyour energy high at any gathering.
To make the soju latte:
You have to prepare halfaglass of your favorite coffee. (Brewed coffee +sugar +milk) or use canned latte.
Then, add two shots of soju to your half-filled cup of coffee. Then, stir, and taste until you get that perfect balance of coffee and soju you desire.
Then, add some ice!
Enjoy while you watch some Korean Series!
* This story originally appeared on Yummy.ph. Minor edits have been made by the OOTDMYANMAR editors.
Tags korea, korean, latte, ootdmyanmar, ootdmyanmareats, soju
THE REAL MEANING OF PANTONE’S COLORS OF THE YEAR FOR 2021
No Comments on THE REAL MEANING OF PANTONE’S COLORS OF THE YEAR FOR 2021
2021 မှာ ခေတ်စားမယ့် Pantone Color တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်
Pantone Color for 2021 is Ultimate Gray and Illuminating(Yellow). These colors represents strength and hope, appropriate to the previous challenging year.
2021 ရဲ့ Pantone Color က တော့ Ultimate Gray နဲ့ Illuminating (Yellow) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေက ခွန်အား နဲ့ မျှော်လင့်ချက် ကို ကိုယ်စားပြုပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကိုဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက် အတော်လေးသင့်လျော်တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။
At the end of every year, the Pantone Color Institute picksacolor that will define the year ahead. Color of the Year isamarketing force that touches furniture, fashion items, brands, and tech.
နှစ်တစ်နှစ်အဆုံးသတ်တိုင်းမှာ Pantone Color အဖွဲ့အစည်းက နောက်လာမယ့်နှစ်ကိုရည်ညွှန်းမယ့် အရောင်တွေကို ရွေးချယ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အရောင်တွေက ပရိဘောဂတွေ၊ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေ ရောင်းအားတက်စေဖို့အသုံးပြုရာမှာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
The Pantone Color System is acknowledged as the lingua franca universal language of color, analysts said. A unique code and exact ink formula is assigned to every shade. This ensures that the color remains the same regardless of physical circumstance such as lighting.
Pantone Color System က လူအများနားလည်နိုင်တဲ့ဘာသာစကားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရကြောင်း လေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်။ အရောင်တွေတိုင်းကို တသီးတန့်ဖြစ်တဲ့ code တွေနဲ့ တိကျတဲ့ ink formula တွေအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလင်းရောင်လို ပြင်ပထိတွေ့မှုတွေကြောင့် အရောင်မှိန်သွား တာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
This year’s colors of the year come with unique codes, PANTONE 17-5104 for Ultimate Gray and PANTONE 13-0647 for Illuminating. “We need to feel that everything is going to get brighter – this is essential to the human spirit,” Pantone said.
ဒီနှစ်မှာရွေးချယ်ထားတဲ့အရောင်တွေကတော့ ထူးခြားတဲ့ code တွေဖြစ်တဲ့ Ultimate Gray ရဲ့ PANTONE 17-5104 နဲ့ Illuminating ရဲ့ PANTONE 13-0647 ဖြစ်ပါတယ်။ “အရာရာတိုင်းက ပိုတောက်ပလာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးရဖို့လိုပါတယ်။ ဒါက လူသားတွေရဲ့စိတ်ဝိဉာဉ်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့အရာပါပဲ” လို့ Pantone က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
PHOTO BY INSTAGRAM/PANTONE
* This story originally appeared on Reportr.world. Minor edits have been made by the OOTDMYANMAR editors.
Tags 2021, coloroftheyear, ootdmyanmar
No Comments on VIDEOS TO WATCH RIGHT NOW
အခုနေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ
We’ve been trying to create contents as much as we can. Contents to entertain, educate and inspire you, loves! So we’ve rounded up the YouTube video we’ve edited and compiled just for you:
ဗီဒီယိုတွေကို တတ်နိုင်သမျှ များများတင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ အချစ်တို့အတွက် ဖျော်ဖြေရေးတွေ၊ အသိပညာပေးတွေ၊ ဗဟုသုတရစေမယ့်အရာတွေပါ။ ဒါကြောင့် ရှေ့မှာတင်ခဲ့ပြီးသားဗီဒီယိုတွေကို အချစ်တို့အတွက် ပြန်စုထားပါတယ်။
Make sure to subscribe to us. It meansalot to us!
Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်၊ အချစ်တို့ရဲ့ အားပေးမှုက တကယ်ကိုအရေးပါ ပါတယ်။
Tags myanmarcelebrity, ootdmyanmar, ootdmyanmarvideo, tiktok, tiktokmyanmar, youtibe, youtube, youtubechannel
STELLA MCCARTNEY’S INSPIRING BREAST CANCER AWARENESS CAMPAIGN
No Comments on STELLA MCCARTNEY’S INSPIRING BREAST CANCER AWARENESS CAMPAIGN
အတုယူစရာကောင်းတဲ့ Stella McCartney’s ရဲ့ ရင်သားကင်ဆာအသိပေးရေးကမ်ပိန်း
Though it’s already November, Stella McCartney launched raw, and emotional portraits to promote breast cancer awareness last October.
နိုဝင်ဘာလရောက်သွားပြီဆိုပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ လမှာ Stella McCartney က ရင်သားကင်ဆာနဲ့ပက်သက်ပြီး အသိပေးနှိုးဆော်ဖို့ စိတ်ခံစားမှုတစ်စုံတစ်ရာ ရစေမယ့် portrait ပုံကြမ်းအချို့ကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
Photo credits to @stellamccartney
The British designer tapped Pulitzer Prize-winning photojournalist Lynsey Addario and filmmaker and activist Alice Aedy to capture 12 women of diverse ages and backgrounds who have gone through, or are going through,abreast cancer diagnosis.
ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Stella McCartney က ပူလစ်ဇာဆုရှင် သတင်းထောက် Lynsey Addario ၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ နဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Alice Aedy တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ရင်သားကင်ဆာရောဂါကို ကြုံတွေ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အသက်အရွယ်မတူညီတဲ့ နောက်ခံဘဝဇာတ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၂ ဦး ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
These women bare their scars, share their stories and strength, while wearing Louise Listening and Adidas by Stella McCartney post-mastectomy bras at home during the quarantine. Sales of their pink Whitney Popping lingerie set will support Stella McCartney Cares Foundation — aiding breast cancer initiatives globally.
အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေက သူမတို့ရဲ့ဒဏ်ရာအမာရွတ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံတွေကို ဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲက အမျိုးသမီးတွေဟာ quarantine ကာလအတွင်း အိမ်မှာနေရင်း Stella McCartney ရဲ့ Louise Listening and Adidas post-mastectomy bra တွေကို ဝတ်ဆင်ထားကြတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ Stella McCartney ရဲ့ pink Whitney Popping lingerie set ကို ရောင်းချရတဲ့ငွေကြေးက သူမရဲ့ ရင်သားကင်ဆာစောင့်ရှောက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ရန်ပုံငွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရင်သားကင်ဆာအသိပေးကာကွယ်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Watch the short film of Stella McCartney’s short film titled, “A Letter to My Loved Ones,” for Breast Cancer Awareness Month.
ရင်သားကင်ဆာ အသိပေးရေး လ အတွက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Stella McCartney ရဲ့ “A Letter to My Loved Ones” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်အတိုကို ဒီ link မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Tags breastcancerawarness, ootdmyanmar, stellamccartney
7 COOL MINIMALIST IDEAS FOR YOUR FIRST TATTOO
No Comments on7COOL MINIMALIST IDEAS FOR YOUR FIRST TATTOO
ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးတက်တူးအတွက် အမိုက်စား Minimalist တက်တူးဒီဇိုင်း ၇ မျိုး
Gettingatattoo isalifelong commitment, unless you go through the process of having it removed or covered up — which is painful and expensive. So if you’re thinking of getting inked for the very first time in your life, we suggest to have something small and subtle —- minimal tattoos!
တက်တူးထိုးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပါသွားမယ့်အရာပါ။ ပြန်မဖျက်ဘူး၊ အပေါ်ကနေ ထပ်မဖုံးဘူးဆိုရင်ပေါ့။ ဈေးကြီးသလို နားလည်းနာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘဝမှာ ပထမဆုံးတက်တူး ထိုးဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် သေးသေးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ minimal တက်တူးဒီဇိုင်းလေးတွေကို ထိုးဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
1. A makeshift ring လက်စွပ်ပုံစံလေးတွေ
2. A pretty little heart ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသည်းပုံလေးတွေ
3. A symbolic number နံပါတ်တွေ
4. A punctuation mark Punctuation အမှတ်အသားလေးတွေ
5. Small animal တိရိစာ္ဆန်ပုံသေးသေးလေးတွေ
6. Your favorite food or drink ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်ပုံတွေ
7. Favorite word အကြိုက်ဆုံးစကားလုံးတွေ
Tags ootdmyanmar, tattoo
OBSESSED WITH THIS LOCAL BRAND’S STYLISH JEWELRY DESIGNS
No Comments on OBSESSED WITH THIS LOCAL BRAND’S STYLISH JEWELRY DESIGNS
သဘောကျမိတဲ့ Local Brand Jewelry ဒီဇိုင်းများ
It’s notasecret that accessorizing isaway to elevate your everyday OOTDs. But if you’re lazy to search the right accessories, we’re here to make thingsalot easier for you. When you feel like your minimal look is in need of an extra glam, we suggest you join Instagram’s coolest accessory: chains of gold jewelry! They’re versatile enough to be worn with your denims or dresses.
Accessory တွေက ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို ပိုထူးခြားသွားအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် accessories တွေကိုရှာဖို့ ပျင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ အချစ်တို့အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူသွားအောင် OOTD က ကူညီပေးဖို့အသင့်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ minimal look ကို ပိုပြီးထူးခြားတောက်ပသွားစေချင်တယ်ဆိုရင် Instagram ရဲ့ အမိုက်စား accessory တွေဖြစ်တဲ့ ရွှေရောင်ချိန်းကြိုးဒီဇိုင်း accessory တွေကို စမ်းကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ သူတို့က ဂါဝန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျင်း နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုစတိုင်မျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်နေမှာပါ။
Local jewelry brand Pour Les Anges curated stylish golden necklaces, earrings, bracelets, and rings that would upgrade your daily OOTDs indoors or outdoors.
Local jewelry brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pour Les Anges ရဲ့ စတိုင်ကျတဲ့ ရွှေရောင်ဆွဲကြိုး၊ နားကပ်၊ လက်ပတ် နဲ့ လက်စွပ် တွေက အပြင်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ daily OOTD တွေကို တမူထူးခြားအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မျာ အသေအချာပါပဲ။
Here’sacloser look at some of the pieces worn by Myanmar Celebrities:
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားသူတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Dee wearing Horizontal Moon & Square Sun set @19,000 KS
Thinzar Wint Kyaw wearing Starry / Ronde choker + Face necklace – 18,000 KS
Ashley wearing The Wise Owl3layers set @26,000 KS and Double Chained Hoops (one sided) @8,000 KS
Honey Nway Oo wearing Double chained Hoops ( one sided) @8000 KS
May Grace wearing The Lady Layer Set @22,000 KS
Khay wearing Bamboo Hoops @12,000 KS and Ronde/ Starry Choker + Face Necklace @ 18,000 KS
San Yati wearing Addison Rae Inspired Mariposa Choker @31,000 KS
and Double Layer Mariposa Necklace @11,000 KS
You can shop at their FB page https://www.facebook.com/pourlesanges
သူတို့ရဲ့ FB page https://www.facebook.com/pourlesanges မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
PS Every time you shop 200 KS is donated foracause. How awesome right?
PS တစ်ခုဝယ်တိုင်း နှစ်ရာကျပ်ပါဝင်လှူဒါန်းပြီးသားဖြစ်လို့ ကုသိုလ်လည်းရတယ်နော်။
Tags jewelry, ootdmyanmar, plajewelry, pourlesanges, pourlesangesmyanmar, supportlocal
WE CAN’T WAIT FOR “LEGALLY BLONDE 3” HAPPENING THIS 2022
No Comments on WE CAN’T WAIT FOR “LEGALLY BLONDE 3” HAPPENING THIS 2022
We Can’t Wait for “Legally Blonde 3” Happening this 2022 2022 မှာ ထွက်မဲ့ “Legally Blonde 3” ကိုကြည့်ရဖို့မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး
Elle Woods fans, Legally Blonde3is officially moved to 2022. Waiting—two more years, so we can finally watch our favorite pink girl – Harvard Law School grad on the big screen. MGM Studios announced on twitter of their film’s third installment in 2022. They shared the news shortly after the Legally Blonde cast’s virtual reunion, where Reese Witherspoon, Selma Blair, and more sat down to talk about the movie almost two decades later.
Elle Woods ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေရေ… Legally Blonde3ကတော့ 2022 ကို တရားဝင်ရွှေ့ဆိုင်းသွားပါပြီ။ နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ထပ်စောင့်ပြီးရင်တော့ အချစ်တော် Pink girl – Harvard Law School grad ကို ပိတ်ကားပေါ်မှာမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ MGM စတူဒီယို က သူတို့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်မှာ တတိယမြောက်ရုပ်ရှင် ကို 2022 မှာထုတ်လွှင့်မယ့်အကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းကို Legally Blonde ရဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Reese Witherspoon ၊ Selma Blair နဲ့ အခြားသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အွန်လိုင်းကတဆင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ အားလုံးက ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအကြာအပြီးမှာ ရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Here we go!!!!💕💅🏽💖 https://t.co/QydPPdmHnP
— Reese Witherspoon (@ReeseW) October 21, 2020
5 THINGS TO DO WHEN FEELING UNINSPIRED: INSPIRED BY PHWAY OO
No Comments on5THINGS TO DO WHEN FEELING UNINSPIRED: INSPIRED BY PHWAY OO
စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေပျောက်နေရင် လုပ်သင့်တဲ့အချက် ၅ ချက် : Phway Oo ရဲ့အကြံဉာဏ်
As much as you try to be positive and productive sometimes it’s just not coming out how you’ve planned it. Instead of being frustrated, take time to dose off and put your creative energy intoanew hobby/activity. But what activity? Well, let’s get inspired with Phway’s activities while on #stayathome.
ဘယ်လောက်ပဲ အကောင်းမြင်စိတ်တွေပွားများပြီး အလုပ်တွင်အောင်ကြိုးစားပါစေ တခါတလေကျရင် ကိုယ်စီစဉ်ထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ကြုံလာရင် စိတ်ပူပန်ညစ်ငြူးမနေဘဲ အချိန်ခဏယူပြီး ဝါသနာအသစ် ၊ လုပ်စရာအသစ်တစ်ခုခုမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ? ဖွေးရဲ့ #stayathome activity တွေကိုကြည့်ပြီး အကြံဉာဏ်ရယူလိုက်ကြရအောင်။
#1 Do your skincare (Skincare လုပ်ပါ။)
Photo credits from @phwayoopsie
#2 Water your plants (အပင်ရေလောင်းပါ။)
#3 Drink your favorite drink (အကြိုက်ဆုံးသောက်စရာကို သောက်ပါ။)
#4 Pray (ဘုရားရှိခိုးပါ၊ ဆုတောင်းပါ။ )
#5Bake your heart out (မုန့်ဖုတ်ပါ။ )
Feeling uninspired now and then is normal especially this tough times. Remember, it’s important to acknowledge the way you’re feeling then take the appropriate activity to remedy the situation.
တခါတလေမှာ အကြောင်းပြချက်မရှိ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးတာက အခုလိုကာလမှာ လူတိုင်းဖြစ်နေကျ သာမန်ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကို သတိပြုမိတာနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေသုံးပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်လည်ကုစားဖို့မမေ့ပါနဲ့။
Tags myanmar, ootdmyanmar, phwayoo